मनाङको तिल्चेका ७५ घरधुरीलाई दशैंमा राहत सहयोग
लमजुङ, असोज २७ गते । हिमाली जिल्ला मनाङ तिल्चेका पीडित ७५ घरधुरीले दशैंमा विदेशबाट राहत सहयोग पाएका छन् ।
नासों गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ तिल्चे घर भई बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, कोरिया, बेल्जियम, इटलीलगायतका देशमा बस्दैआएका रिहं च्हमी (चेलीबेटी दिदीबहिनीहरु) ले सहयोग प्रदान गर्नुभएको हो ।
केही पुरुषहरुले पनि सहयोग गरेका छन् । वडा नं. ७ का अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङकाअनुसार विदेशबाट रिहं च्हमीहरुले पठाएको १० लाख ५६ हजार ३ सय ६४ रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न राहत सामग्री तिल्चेमा बाढी प्रभावित परिवारलाई प्रदान गरिएको हो ।
तिल्चे गाउँमा बुधबार एक कार्यक्रमकाबीच खाद्यान्न प्रदान गरिएको छ । दशैंको समयमा सहज रुपमा दशैं मनाउन सकुन भनेर विदेशबाट चेलीबेटीहरुले सहयोग पठाएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनभुयो ।
विदेशबाट आएको रकमबाट प्रतिघर परिवारलाई २५ केजीको चामल ४ बोरा, मैदा २० केजी, तेल एक प्याकेट, मुसुरको दाल ५ केजी, चिनी ५ केजीका दरले सहयोग गरिएको छ । एक घरलाई १४ हजार रुपियाँ बराबरको सहयोग प्रदान गरिएको गरुङले बताउनुभयो ।
बाढीपहिरोका कारण सडकअवरुद्ध भएकाले खाद्यान्न लैजान समस्या भएकाले विदेशबाट आएको सहयोग रकमले खाद्यान्न लगेर वितरण गरिएको वडा नं. ६ का वडा सदस्य पुष्पबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । बाढी प्रभावित मात्र नभएर गाउँका सबै घरधुरीलाई सहयोग प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । राहत सामग्री लमजुङको बेंसीशहरदेखि धारापानीसम्म गाडीमा र धारापानीबाट तिल्चेसम्म खच्चडमा लगिएको थियो ।
राहत सहयोगका लागि बेलायतमा माला गुरुङ, बिमला गुरुङ र युके तुम समाजका अध्यक्ष उमरबहादुर गुरुङले पहल गर्नुभएको थियो । इटलीमा तिलकबहादुर गुरुङ, कोरियाबाट मनाङ परिवार कोरियाका विनराज गुरुङ, मनराज गुरुङ र सुरेश गुरुङको पहलमा, अमेरिकाबाट कर्मा लामा, अष्ट्रेलियाबाट यमुना गुरुङको पहलमा सहयोग संकलन भएको हो ।
काठमाडौंमा निर्मला गुरुङ घलेले सहयोग गर्नुभएको छ । दशंैको समयमा बाढी प्रभावित परिवारमा दशैं मनाउन सहज होस् भनेर सहयोग पठाएको सहयोगदाताले बताएका छन् । राहत पाएपछि नागरिक खुसी भएका छन् । विपद्को समस्या परेको समयमा गाउँमा राहत आएपछि गाउँबासी दंग छन् । नासों गाउँपालिका ७ का अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ, वडा नं. ६ का वडा सदस्य पुष्पबहादुर गुरुङ, स्थानीय माइकल लगायतले राहत सामग्री प्रदान गर्नुभएको थियो । तिल्चे गाउँमा गुरुङ, लामा र दलित समुदायको बसोबास छ ।